प्रा.डा. खड्का त्रिवि अस्पतालको निर्देशक नियुक्त, डेढ वर्ष मात्रै अवसर – Health Post Nepal
प्रा.डा. खड्का त्रिवि अस्पतालको निर्देशक नियुक्त, डेढ वर्ष मात्रै अवसर
२०७५ मंसिर २६ गते १६:०४
करिब सात महिनादेखि रिक्त त्रिभुवन विश्वविज्ञालय (त्रिवि) शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जको निर्देशकमा प्रा.डा. प्रेम खड्का नियुक्त भएका छन् । त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले सर्च कमिटीको एक नम्बर सिफारिसमा परेका खड्कालाई निर्देशकमा नियुक्त गरेको हो । प्रा.डा. खड्काले करिब डेढ वर्षपछि अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन् ।
अघिल्लो साता नै कार्यकारी परिषद्को बैठकमा बहुमतबाट खड्कालाई निर्देशक नियुक्त गर्ने प्रयास भए पनि पदाधिकारीबीचको विवादका कारण रोकिएको थियो । पदाधिकारीबीच सिफारिसमध्येबाट अफूअनुकूलको निर्देशक बनाउने होड चल्दा सिफारिसको पनि झन्डै महिनादिन बित्न लाग्दासमेत अस्पतालले निर्देशक पाउन सकेको थिएन । पछिल्लो समय पदाधिकारीबीच खड्काको नाममा सहमति भएको जनाइएको छ ।
निर्देशक सिफरिसका लागि त्रिविले दुईपटकसम्म सर्च कमिटी बनाउनुपरेको थियो । पहिलोपटक गठित सर्च कमिटीका सदस्यबीच व्यक्ति चयनमा एकमत हुन नसकेर नाम सिफारिस नगरीकनै कमिटी विघटन भएपछि त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले ८ कात्तिकमा दोस्रो सर्च कमिटी गठन गरेको थियो । आइओएमका डिन डा. जगदीशप्रसाद अग्रवालको संयोजकत्वमा गठित डा. प्रदीप ज्ञवाली र डा. अभिमन्यु झा सदस्य रहेको दोस्रो कमिटीले वरिष्ठताका आधारमा २ मंसिरमा तीनजनाको नाम सिफारिस गरेको थियो । सिफारिसमा पर्नेमा क्रमशः डा. प्रेम खड्का (निर्देशक नियुक्त) डा. वाइपी सिंह र डा. सुशील शील्पकार थिए । उनीहरुमध्ये पहिलो नम्बरका खड्काले नेतृत्वको जिम्मेवारी पाएका हुन् ।
सिफारिसका क्रममा सर्च कमिटीले प्राध्यापक भएको मितिलाई आधार मानी वरिष्ठता निर्धारण गरेको थियो । एकैदिन प्राध्यापक भएकाको हकमा भने सेवाप्रवेश मितिलाई आधार बनाइएको थियो । वरिष्ठता सूचीमा अगाडि रहेका केही प्राध्यापक निर्देशक बन्न अनिच्छुक देखिएकाले इच्छा राखेका र वरिष्ठतामा पनि अगाडि रहेकामध्ये तीनजना सिफारिसमा परेका हुन् । डा. गोविन्द केसीले वरिष्ठतासँगै पूरा चारवर्षे कार्यावधि बाँकी रहेकालाई मात्रै निर्देशक बनाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।
Tags: त्रिवि अस्पताल, प्रा.डा. प्रेम खड्का